tyrino | technology site
Email မှ လက်ခံခြင်း
သင်၏ email address ကို ထည့်ခြင်းဖြင့် subscribe လုပ်ပြီး ဒီ blog မှာတင်တဲ့ ပိုစ်အသစ်များကို email တွင် ရယူပါ။
My wordpress is already closed!!!
July 9, 2012 — tyrino
ကျနော်ရဲ့ ဒီနေရာလေးကို ရပ်တန့်ထားတာ တော်တော်ကြာပါပြီ..
အွန်လိုင်းနဲ့ အဆက်ပြတ်ခဲ့ကထဲကပါ.. အခု comment မှာ လာတောင်းဆိုကြတာတွေကို မေးထဲမှာ တွေ့လို့ ဒီနေရာမှာ လာပြောတာပါ..
ကျနော့်ရဲ့ အသစ်လုပ်ထားတဲ့ epub တွေအပါအဝင် ရေးဖြစ်တာတွေ အများစုကို forum တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာဆိုင်ဘာမီဒီယာ မှာပဲ လာဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်..
epub များအတွက် ဆိုဒ်တစ်ခု လုပ်ဖို့တော့ စဉ်းစားထားပါတယ်.. လောလောဆယ်တော့ http://mmcybermedia.com မှာပဲရှိပါတယ်..
လောလောဆယ် ဒေါင်းမရသူများအတွက် mediafire password ကတော့ bluespider(mmcybermedia) ပဲဖြစ်ပါတယ်
Posted in accessories. LeaveaComment »
Sony Ericsson xperia များကို root, font, keyboard ထည့်ခြင်း
December 30, 2011 — tyrino
၁. လိုအပ်တဲ့ driver ကို ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းလိုက်ပါ…
အဆင့် ၁ ကနေ ၄ အထိဟာ driver မရှိတဲ့ PC အတွက်သာဖြစ်ပါတယ် ရှိရင် မလိုအပ်ပါဘူး 😀 😀
လိုအပ်တဲ့ ဖိုင် ၁ ဖိုင်ဖြစ်တဲ့ အောက်ကလင့်ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ..အဲဒီထဲမှာ root လုပ်မယ့် အရာတွေပါပါတယ် ;D ;D
ကျန်တာကတော့ ပေါ်လာတဲ့ စာလေးတွေ လိုက်ဖတ်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ (ရေးရမှာ ပျင်းတာရယ် ဒီလောက်တော့ လုပ်တတ်မယ် ထင်လို့ပါ :2 :2)
ဒီနည်းလမ်းဟာ Xperia series အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ် 😀 😀
Posted in mobile. Tags: andriod, mobile.7Comments »
ကျောက်ဆစ်နှင်းဆီ ဝင်ရိုးစွန်း – မင်းခိုက်စိုးစံ
ကျွန်တော်တချိန်က အလွန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ ဆရာမင်းခိုက်စိုးစံရဲ့ ကျောက်စက်နှင်းဆီဝင်ရိုးစွန်းကို epub ပြောင်းလိုက်ပါတယ်
Typed By- G!VER
Creator – Bluespider
Posted in mobile. Tags: epub. 1 Comment »
Mediafire မှာ လိုချင်တဲ့ ဖိုင်များ ရှာခြင်း
November 4, 2011 — tyrino
သီချင်းတွေ ဇတ်လမ်းတွေကို အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းတဲ့အခါမှာ fileserve,filesonic,rapid စသဖြင့်ရှိကြတဲ့အထဲမှာ Mediafire ကနေဒေါင်းရတာ အဆင်အပြေဆုံးဆိုတာ သိကြမှာပါ။ အဲဒီတော့ mediafire မှာက သူ့ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ file တွေကို ရှာတာမပါပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က သူ့အပေါ်မှာ ရှိတာတွေကို ရှာဖို့ နည်းသုံးရပါတော့တယ်။
အဲဒီကနေ လိုချင်တဲ့ စာလုံးကို ရိုက်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။
http://www.google.com/ ကိုသွားပြီး search box ထဲမှာ site:mediafire.com ကိုရိုက်ပြီး space လေးခြားပြီး ရှာချင်တဲ့ နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ရပါတယ်။ ထပ်ပြီး format အတိအကျလိုချင်ရင် လိုချင်တဲ့ format ကို ပါ ရိုက်ထည့်ရပါတယ်။
ဥပမာ site:mediafire.com i love u mp3
site:mediafire.com brief time of history epub
site:mediafire.com andriod market zip
site:mediafire.com transformer avi
အဲဒီမှာ ကျလာမယ့်လင့်တွေထဲမှာ အဆင်ပြေတဲ့ဟာကို သွားလိုက်ရင် ကိုလိုချင်တဲ့ mediafire ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Posted in accessories, google, online. Tags: google, knowledge. LeaveaComment »
September 6, 2011 — tyrino
epub ဆိုတာ mobile တွေအတွက် အဆင်ပြေဖို့ လုပ်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ pdf တွေကို ဖုံးတွေပေါ်က ကြည့်တဲ့အခါမှာ screen သေးတဲ့အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီ epub ကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ screen အလိုက်အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့ size ကလဲ တော်တော်ကွာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ လူသုံးများလာနေပါတယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာဆိုင်ဘာမီဒီယာမှာ တင်ထားတဲ့ epub လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်အသစ်ထပ်လုပ်ဖြစ်တာနဲ့ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။ လောလောဆယ် ရှိတာလေးတွေ အရင်ယူထားလိုက်ပါ။ တခုပြောချင်တာက ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ ဇော်ဂျီနဲ့ပါ ခင်ဗျာ
ipod,iphone မှာ ibook နဲ့ ဖတ်လို့ရပါတယ်။
windowmobile အတွက်တော့ freda ရှိပါတယ်။
andriod အတွက်တော့ aldiko နဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်နှင့် ဆောင်းရာသီ ဒဿန (တာရာမင်းဝေ)
အိမ်မက်အမျိုးမျိုးနှင့် အသားလှုပ် နိမိတ်
Posted in accessories. Tags: epub. 8 Comments »
Hidden folder in NOKIA phone
September 5, 2011 — tyrino
ဖုံးထဲမှာ folder တစ်ခုကို ကြိုက်တဲ့ နာမည်နဲ့ ဆောက်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် နာမည်ကို “<name>.jad” လို့ပေးလိုက်ပါ..
ပျောက်ချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို folder ထဲ ထည့်လို့ရပါပြီ..
နောက် folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ နာမည်ကို “<name>.jar” လို့ ပေးလိုက်ပါ။ နာမည်နှစ်ခုက ဆင်တူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ folder ကို ဖန်တီးလိုက်ပြီးတာနဲ့ ပထမ folder ဟာ hidden ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပြန်ပေါ်ချင်တဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ ဒုတိယ folder ကို နာမည်တစ်ခုခုချိန်းလိုက်ပါ.. ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်…
Posted in mobile. Tags: mobile, nokia. LeaveaComment »
google+ ကနေ facebook status တင်နည်း
July 25, 2011 — tyrino
ပထမဆုံး သင့်အကောင့်မှာရှိတဲ့ email ကနေ update တင်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ http://www.facebook.com/mobile/ ကိုသွားရပါမယ်။
ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ့ email ကို copy ကူးလိုက်ပါ။
Google+ ကိုသွားပြီး login ဝင်လိုက်ပါ။
circles ကိုသွားပြီး circle အသစ်တစ်ခု create လုပ်လိုက်ပါ။
နာမည်ကို ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Update Facebook လို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
Addanew person ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ခုနက ကူးထားတဲ့ မေး ကိုထည့်လိုက်ပါ။
facebook ပေါ်တင်ချင်တဲ့အခါမှာ update facebook circle ကို ထည့်ပြီး တင်လိုက်ရုံပါဘဲ။
တစ်ခုသတိထားရမှာက Also email 1 person not yet using Google+ ကို check လုပ်ထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
Posted in google, online. Tags: google. LeaveaComment »
andriod apple blackberry coding epub facebook font gmail google gtalk hacking iphone ipod knowledge mobile nokia regsitry shortcut wifi window windowmobile zawgyi